जब तपाईं मेट्रो स्टेशन "Solntsevo" हेर्न?
आवासीय क्षेत्रमा केन्द्र देखि दूर मा परिवहन समस्या राजधानी को दक्षिण-पश्चिम वर्ष र दशक लागि तानाबाना बिकसित हुँदैछ थिए। आफ्नो समाधान सबैभन्दा तर्कसंगत तरिका सोभियत समयमा गरियो फेला पार्न प्रयास, तर धेरै कारण, कहिलेकाहीं पूर्ण उद्देश्य को लागि, निरन्तर अनिश्चितकालीन भविष्य सौतेली। धेरै Muscovites लामो छ त्यहाँ भूमिगत स्टेशन "Solntsevo" हुनेछ जब को प्रश्न सान्दर्भिक थियो। यस्तो Solntsevo र Novo-Peredelkino, जस्तै क्षेत्रहरु हदसम्म कारण यसको remoteness गर्न काटेर र राजधानी मा जीवन देखि छुट्टयाएर रह्यो। र यो आफ्नो बासिन्दा लागि धेरै सामाजिक समस्याको वृद्धि दिनुभयो।
मेट्रो स्टेशन नक्सामा "Solntsevo" मास्को
यसको चिसो बिन्दुबाट सारियो मामला केही वर्ष मात्र पहिले छ। Preexisting Metrostroevskaya परियोजनाहरू हदसम्म संशोधित र धेरै हदसम्म सम्पादन गरियो। र नयाँ परियोजना कार्यान्वयन लागि स्वीकार गरिएको छ। को मास्को मेट्रो को Solntsevo लाइन त्वरित गति निर्माण गरिएको छ। र मेट्रो स्टेशन "Solntsevo" 2016 बारे नै नाम को मास्को जिल्ला देखा पर्छ। स्टेशन "दक्षिण पश्चिम" (यो Sokolnicheskaya निर्देशन) गर्न "Novoperedelkino" विकास भइरहेको छ, जो सबै लाइन पास नयाँ डिजाइन समाधान अन्तर्गत। प्राविधिक र डिजाइन समाधान यो तथाकथित "सजिलो मेट्रो" खोक्रो emplacement हुनेछ। सुरु साइट Solntsevo लाइन को भाग रूपमा छ स्टेशन र तिनीहरूलाई बीच पाँच फैलिएको देखिन्छन्। नयाँ मेट्रो स्टेशन बीचमा "Solntsevo", स्थानीय बासिन्दा एक भन्दा बढी पुस्ता excites जो खोल्ने को मुद्दा हुनेछ। यो भिन्न को तीव्र निर्माण को छनोट मास्को मेट्रो मा excesses विरुद्ध संघर्ष दौरान, बीसौँ शताब्दीको दोस्रो आधा प्रारम्भिक अभ्यास थियो कि नयाँ लाइन को वास्तु उपस्थिति को बेवास्ता होइन कि उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, मेट्रो स्टेशन "Solntsevo" यो हुन हुँदैन। परियोजना गर्न दृष्टान्तहरू हेर्दा धेरै स्टेशन Solntsevo लाइन धेरै आधुनिक र impressively देखिन्छ। यसबारे मात्र डिजाइन समाधान को एक सभ्य कार्यान्वयन लागि अब छ। र यदि सबै योजना अनुसार जान्छ निर्माण कार्य तालिका, मेट्रो स्टेशन "Solntsevo" आफ्नो पहिलो यात्रु तीन वर्ष मा हुनेछ। मोडतर्फ नोड हुनेछ स्टेशन "दक्षिण पश्चिम", जाने छन्। यसलाई परे लाइन Skytrain थप विस्तारको योजना सम्म भर्खरै छलफल र त्यहाँ विकास लागि धेरै विकल्प छन्।
योजना र संभावनाहरु
2011 मा, एक southwesterly दिशा मा मास्को को प्रशासनिक विस्तार नयाँ क्षेत्रहरू र राजधानी को आवासीय क्षेत्रको वाहन प्रदान शामिल। प्रसिद्ध मास्को उपनगर Solntsevo र Novo-Peredelkino भर्खरै खुलेको प्रशासनिक ती परिस्थितिमा हुन बन्द मा। यो सबै यो "दक्षिण-पश्चिम" को लागि, तर पनि विपरीत दिशामा मात्र होइन शाखा को धेरै जरुरी विस्तार, नयाँ मास्को को दिशा मा बनाउँछ। तर, यो संग सम्बन्धित मुद्दाहरू को दायरा, अझै पनि केवल चर्चा चरण मा छ, र योजना विशिष्ट परियोजना गर्न अझै पुगेको छैन।
ताल Nyos क्यामरून मा - मात्र पर्यटकहरुका लागि, चरम
Luxor को प्राचीन शहर (मिश्र)
Biruchiy द्वीप - संरक्षित क्षेत्र
विवरण, सेवा र समीक्षा: अस्पताल कोस्ट्रोमा क्षेत्र "रजत हासिल"
चेल्याबिन्स्क मा "विजय बगैचा": इतिहास, ठेगाना, फोटो
उपयोगी, रोचक, मजा - स्कूल बारेमा पहेलियों
हिमनयन नींबू। दबाब बढाउँछ वा यो फल कम गर्छ?
Stas Lindover। जीवनी Bodybuilder
सोभियत निर्देशक बोरिस Barnet: जीवनी
"राजकुमारी सोफिया" - को जन्मदिन केटी को लागि एक केक। सबैभन्दा सरल डिजाइन विचार
संसारको SU-27 मा सबै भन्दा राम्रो लडाकु: इतिहास, रोचक तथ्य
32 तपाईं केहि पनि हासिल गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्ने विचार
"Abomin": बच्चाहरु समीक्षा लागि प्रयोगको लागि निर्देशन
छाला निको र कपाल को विधिहरू
कर्करहरूको लागि समुद्री जहाज। सबैभन्दा राम्रो व्यञ्जनहरू
विज्ञान पुस्तकालय को एकेडेमी: कहाँ? विवरण, दिशा निर्देशन